कार्यालय सरेको सूचना
बालिका विद्यालयमा जेन्डरको निर्मिति
कोरोनाले कति शिक्षकको ज्यान लियो ?
संघीयतामा झन्झन् गुम्दैछ शिक्षकको साख
जबसम्म सर्वसाधारणको जिब्रोबाट मास्टर भन्ने रूखो अभिव्यक्तिलाई मिल्काइँदैन, तबसम्म यो पेशा यही रूपमा आलोचित, तिरस्कृत र उपेक्षाको शिकार बन्ने निश्चित छ।
युगीन गुरुकुलीय शिक्षाः नयाँलाई दीक्षा !
आउनेलाई स्वागत, जानेलाई विदाइ र अवस्था विशेष उमङ्ग घडीमा बधाई साटासाट गर्ने मानवीय स्वभावको प्रयोग गर्दा बसेको ठाउँबाट उठेर हार्दिकता र शिष्टताको चिनारीसहित हँसिलो मुख पार्नुपर्छ ।
गणित–प्रयोगशाला भएपछि जादूको छडीझैं शिक्षण सिकाइ गर्न सकिन्छ भन्ने सपना धेरैको पाइयो । तर मैले ‘सबै तपाईंमै छ, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक स्रोत सामग्रीमै छ खोज्न सक्नुभयो भने’ भन्ने गरें ।
शिक्षकका व्यथा र आलोचना
भूपाल सिंह ठकुरी
बरू शिक्षकलाई काममा फर्कने वातावरण बनाऔं, उनीहरूको स्वास्थ्य बीमालगायत कोरोना परीक्षणको व्यवस्था गरी सहज रूपमा काममा लगाउनेतर्फ ध्यान दिऊँ न जहाँ र जस्तोसुकै काममा हामी शिक्षक तयार छौं ।
६ महीनामा सक्नेगरी पाठ-याेजना बनाउँदै छाैं !
सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको पठन–पाठनमा अनलाइन, रेडियो, टीभी आदि वैकल्पिक माध्यमका कक्षाहरू खासै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
शिक्षक र सपना
२०६९ को मदन पुरस्कार प्राप्त उपन्यास दमिनी भीर का लेखक राजन मुकारुङ हरेक भेटमा दोह¥याउँछन्, “शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थीलाई सपना देख्न सिकाउनुपर्छ ।” शिक्षणबाटै ‘करियर’ शुरू
साना नानीलाई खाना खुवाए जस्तै हो पढ्न सिकाउने काम पनि। ‘कोखाई कोखाई हाम्म’ भनेर खुवाए जस्तै व्यवहार पढाइमा पनि देखाउनुपर्छ । शुरू–शुरूमा वाक्यका शब्द–शब्द देखाएर आफैं पढिदिनुपर
फिनल्यान्ड र हाम्रो शिक्षा प्रणाली तुलनाको ‘दुष्प्रयास’ !
परीक्षा कम गर्न कुनै साधन र स्रोत जरूरी पर्दैन। विद्यार्थीलाई दण्ड र सजाय नदिने प्रतिबद्घता गर्न पनि पैसा चाहिंदैन । यस्ता थुप्रै सन्दर्भ छन्, जहाँ फिनिस शिक्षा प्रणालीबाट नेपालले सिक्न सक्छ ।
आफैंलाई बिर्सिएर पढाइरहे
बेनर्जीको अथक मेहनतबाट पवित्रा विद्यालय प्राविबाट निमावि, मावि हुँदै, उच्च मावि बन्यो ।
कुनै पनि शिक्षक असल र सफल हो कि होइन भनेर जाँच्ने दुई वटा सूचक छन् ।
तेजकुमार बौद्धाचार्य देशकै सम्पदा
तेजकुमार बौद्धाचार्य (शाक्य) नेपालको आधुनिक शिक्षा पद्धतिसित जोडिएका एक जना यस्ता व्यक्तित्व हुन्, जो गएको ६ दशकदेखि नेपालको शिक्षामा भएका हरेक परिवर्तनका साक्षी बनेका छन् ।
“आजभोलिका अधिकांश शिक्षक किताबमा घोकेका कुरा बाहेक पढाउनै सक्दैनन् । चोरेर पास गरेकाहरूलाई शिक्षक बनाएपछि यस्तै दुर्गति हुन्छ ।”
१४ महिनाकी हुँदा उनलाई पोलियो भयो । तिनताका पोलियो थोपा खुवाउने चलन थिएन । परिणामतः उनी अपाङ्ग भइन् । २०३६ मा भएको उनको अन्तरजातीय प्रेमविवाह अपाङ्गताकै कारण १० वर्षभन्दा टिक्न सकेन ।
‘पाल्पाका हेडसर’: जगतबहादुर जोशी
४१ वर्षको शिक्षण जीवनमा उनले पाल्पामा शिक्षाको जग त बसाए नै, राष्ट्रकै लागि थुप्रै योग्य जनशक्ति पनि उपलब्ध गराए ।
बेनर्जीको अथक मेहनतबाट पवित्रा विद्यालय प्राविबाट निमावि, मावि हुँदै, उच्च मावि बन्यो । २०४८ सालयता करिब १ हजार जना छात्रछात्रा एसएलसीमा उत्तीर्ण भएका छन् । एसएलसीमा उत्तीर्ण हुने सङ्ख्या ७५ प्रतिशत र
शिक्षक भएर केही गुमाइनँ । अलिकति आँखा बेलामा जँचाउन पाएको भए केही हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ तर त्यतिबेला त्यसो गर्न पनि पैसा त थिएन नि ! गुमाएको तुलनामा पाएको कता हो कता बढी छ । मित्रता, सम्मान र सद्भाव
बैंक छाडेर स्कूल
उनी खजुरास्थित ज्ञानोदय उच्चमाविमा नेपाली विषय पढाउँछिन् । संस्कृत पृष्ठभूमि भएका शिक्षकले पठाइरहेको विषय एकजना महिलाको जिम्मा लगाउँदा एसएलसीमा नेपालीको रिजल्ट बिग्रन्छ कि भन्ने चिन्ता स्कूलका अन्य शि
एक असल र योग्य शिक्षक
प्रायः सबै शिक्षकले विद्यार्थीलाई राम्रोसँग पढ, राम्रो मान्छे बन भन्छन्, तर आफ्ना शिष्यको प्रतिभा बेलैमा चिनेर त्यसको विकासमा योगदान पु¥याउने गुरुहरू कमै हुन्छन् । तर मलाई भने त्यस्ता महान् गुरु स
विद्यालय र अभिभावक सहकार्य = उच्च सिकाइ उपलब्धि
पढेलेखेका अभिभावकले मात्र होइन, जुनसुकै परिवारले विद्यार्थी सिकाइको उद्देश्यमा सघाउन सक्छन् ।
राज्यको बहिष्कारमुखी नीति नेपालको राष्ट्रिय समस्या हो र यो समस्याको निदान नखोजी राष्ट्र­का रूपमा नेपाल एकीकृत र समृद्ध हुन सक्तैन भत्रे उहाँको मान्यता थियो । नेपाललाई आधारभूत रूपमा अल्पमत समूहको द
कुनै पनि शिक्षक असल र सफल हो कि होइन भनेर जाँच्ने दुई वटा सूचक छन् । पहिलो, उसले आफ्ना हरेक विद्यार्थीमा आत्मविश्वास भर्न सकेको छ कि छैन । दोस्रो, उसले हरेक विद्यार्थीमा असल मानिस बन्ने अभिलाषा सृजना
उनी ८२ वर्षको आदरणीय उमेरमा प्रवेश गरिसकेका छन् । शरीरमा केही उमेरजन्य असरहरू पनि देखा पर्न थालेका छन् । ‘यसो गर्छु, उसो गर्छु’ भन्ने सपना पनि खास बाँकी छैनन् । तैपनि उनमा जाँगर उत्तिकै छ
‘अब वर्षेनी आयोग खुल्छ’
२०५२ सालयता १७ वर्षपछि शिक्षक भर्नाका लागि खुला विज्ञापन गरिएको हो । गएको जेठ महीनामा सञ्चालित लिखित जाँचमा करीब ४ लाख प्रतिस्पर्धी सहभागी थिए । अहिले हामी तिनका उत्तरपुस्तिका परीक्षण सम्पन्न गर्ने क्
शिक्षण जागिर हैन !
कडा अनुशासनले मानिसलाई लक्ष्यमा अनवरत हिंड्ने ऊर्जा दिन्छ । समपर्णभाव दिन्छ । गर्न हुने र नहुने बीचको भेद छुट्याइदिन्छ । गर्न हुने काम मात्र अनुसरण गर्न प्रेरित गर्छ । गर्न नहुने कामलाई जीवनबाट परित्य
शिक्षण पेशाका ४२ वर्ष म्याग्दी र मुस्ताङका विद्यालयमा बिताएका ५८ वर्षीय हरिबहादुर केसी २०६२ सालदेखि मुस्ताङको छोसेरस्थित दिव्यदीप माविमा प्रअ छन् । उनी प्रअ हुनुअघि दिव्यदीप माविको शैक्षिक÷भौति
भावुक हुँदै उहाँ भत्रुहुन्छ, “हाम्रो शिक्षाले हाम्रा घरखेत र गोठबारी सिध्याएर बिल्लीवाठ पारी विदेशतिर धपाएको छ । हामी अतीतको कालो अफ्रिकामा रुपान्तरित त भइरहेका छैनौं ? कक्षाकोठामा विद्यार्थीलाई
“राजनीतिक दलमा लाग्नेहरू शिक्षक नै होइनन् । स्वच्छ शिक्षक नभई छात्रछात्रालाई ज्ञान दिन सकिँदैन । राजनीतिक दलको पछिलाग्नेले विद्यार्थीलाई पढ्न होइन, दलकै झेला बोक्न सिकाउँछन् ।”
सोचाइमा मौलिकता काममा सफलता
नयाँ–नयाँ सोचाइ र समन्वय गर्ने खुबीका धनी प्राचार्य गेहेन्द्रप्रसाद दाहाल एकपछि अर्काे स्कूललाई सफल तुल्याउन लागिपरेका छन्
उनी निम्नमाध्यमिक तहका शिक्षक हुन् । कक्षा ६ र ८ मा विज्ञान विषय पढाउँछन् । नयाँ पाठ शुरु गर्दा उनी सीधै किताबको परिभाषामा जाँदैनन् । विद्यार्थीलाई नयाँ पाठको सामान्य परिचय र अवधारणा सुनाउँछन् ।
योग्यता र लगनका प्रतिमूर्ति कृष्ण सर
बगनाहाको चुरे उमावि हिजोआज बर्दिया जिल्लाको मात्र नभई मध्यपश्चिमकै एउटा उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयको रूपमा चिनिन्छ ।
मेहनती महतो सर !
महतो गणितलाई ‘हाउगुजी’ का रूपमा नभई एउटा उपयोगी र रुचिपूर्ण विषयका रूपमा प्रस्तुत गरिनुपर्ने ठान्छन् । उनको बुझइमा घोकाएर वा तर्साएर विद्यार्थीले गणित सिक्नै सक्दैनन् ।
“चुनौतीलाई परास्त गर्न प्रअ भएपछि मैले मूलतः दुइटा योजना बनाएँ, पहिलो– सबैभन्दा पहिले आफू कर्तव्यनिष्ठ हुने र दोस्रो– समुदायलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने ।” विकट हिमाली जिल्ला जुम्ल
एसएलसी नतिजा ७०–८० प्रतिशतबाट ३०–४० प्रतिशतमा झ्रेको र अङ्ग्रेजीमा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएपछि फेरि ‘ट्रान्सलेशन’ पढाउन÷गराउन शुरु गरेको स्मरण गर्दै ढुङ्गाना भन्नुह
उनी मावि तहमा दैनिक दुई पिरियड पढाउँछन् । भन्छन्, “म यतिले सन्तुष्ट छैन । विद्यालय प्रशासनमा अरू साथीले सहयोग गरेमा आठै घण्टी पढाउन पनि तयार छु ।” विद्यालयको काम छाडेर हत्तपत्त बिदामा बस्द
आजीवन अवकाश नलिने अठोट
इन्दिरा मेडम’ को पहिचानसँगै आर्जेको नाम, दाम र सम्मानका कारण विगतमा बाध्यताले अँगालेको भए पनि अहिले उनी शिक्षण पेशा छोड्ने कल्पनासम्म गर्न सक्दिनन् ।
जगतबहादुर जोशीको जीवनगाथा केलाउँदा पाल्पा जिल्लाको शैक्षिक विकासको झ्लक देखिन्छ । ४१ वर्षको शिक्षण जीवनमा उनले पाल्पामा शिक्षाको जग त बसाए नै, राष्ट्रकै लागि थुप्रै योग्य जनशक्ति पनि उपलब्ध गराए ।
जलेश्वर क्षेत्रका ज्योति
राजकिशोरले एउटै स्कूलमा ३२ वर्ष हेडमास्टर भएर शिक्षा क्षेत्रमा पु¥याएको योगदान, थुप्रै प्रअ र शिक्षकहरूका निम्ति प्रेरणादायी पाठ बन्न सक्छ ।
हालको तेह्रथुम र ताप्लेजुङमा पर्ने आठराई क्षेत्रको समाजलाई शिक्षा र जागृतितर्फ उन्मुख गराउने धेरै मानिसमध्ये देवीप्रसाद उप्रेती र मदनकुमार थापाको योगदान सम्झ्नायोग्य छ ।
शिक्षकको दायित्व बोकेपछि समयमै विद्यालय आउनुपर्ने ङाखुसीको मान्यता छ । उनी भन्छन्, “आपूmले पाएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई सदाचारी बन्न शिक्षा दिने हामीले ठग्न
जसको नामैले तानिए विद्याथी
‘शिक्षक देख्ने वित्तिकै विद्यार्थी डराउँछन् भने त्यो शिक्षक जतिसुकै ठूलो विद्वान् भए पनि काम लाग्दैन । विद्यार्थीलाई आतङ्कित बनाएर सिकाउन सकिँदैन ।’
जीवन सार्थक बनाएँ, सन्तुष्ट छु
मेरो कक्षामा बिहानको सवा ६ ठीक सवा ६ बजे नै बज्थ्यो, न एक मिनेट छिटो, न एक मिनेट ढिलो । मलाई कहिल्यै पनि हुरी, पानीले कक्षामा पुग्न छेकेन । ३८ वर्ष पढाउँदा कक्षा चलेको बेला मुश्किलले ३८ दिन कक्षामा अन
आवाज नै चर्को छ छडी चाहिँदैन - शर्मा प्रअ, ज्ञानोदय मावि, काठमाडौं
स्कूलको आँगन छैन । हामीले प्रयोग गर्दै आएको साहित्यिक पत्रकार सङ्घको जग्गाको विषयमा २४ वर्षदेखि मुद्दा थियो । सर्वोच्च अदालतमा मिलापत्र भएपछि स्कूलले साहित्यिक पत्रकार सङ्घलाई रु.३५ लाख दिनुपर्ने भयो
“चिसो कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा दिन भेडेटार लगेकी छु, पहाड कस्तो हुन्छ भन्ने बुझउन पाँचकन्याको उकालो हिँडाएकी छु ।”
सामुदायिक विद्यालयः पुस्तकालयका नाउँमा बजेट लूट !
अधिकांश विद्यालयले चाहिं पुस्तक बिक्रेतासँगको मिलेमतोमा कामै नलाग्ने केही ‘देखाउने’ किताब किनेर बाँकी पैसा खुलेआम हिनामिना गरेका छन् ।
गभर्नर चेलाका सन्तोषी गुरु
२०२४ सालमा बनारसबाट बी.एस्सी. सकेर भर्खरै इलाम, करफोकस्थित घर फर्किएका थिए, एकराज अधिकारी । त्यहीवेला झपा, बुधबारेको बुद्ध आदर्श माविका प्रअ देवमणि ढकाल विज्ञान र गणित विषय पढाउने शिक्षक खोज्दै अधिकार
आयषा शाक्य । कराँतेको राष्ट्रिय खेलाडी । थुप्रै पदक तथा पुरस्कार विजेता । पछिल्लो पटक गत फेब्रुअरीमा बङ्गलादेशमा सम्पन्न ११औं दक्षिण एशियाली खेल (साग)मा स्वर्णपदक जितेर नेपालको इज्जत बढाएकी २३ वर्षीया
फलाहारमा बाँच्छन्, राम्रो पढाउँछन् !
बन्दको अवज्ञा गर्दा पाण्डेय करिब १० पटक कुटिएका छन् । उनी जो सुकैले स्कूल बन्दको आह्वान गरे पनि त्यसको अवज्ञा गर्ने बताउँछन् । उनको कथन छ, “अधिकारप्राप्तिको बाटो बन्द होइन, बन्दले अधिकार दिलाउने
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूका लागि २०६४ साउन १ गतेदेखि लागू भएको तलवमान
हाम्रो प्रश्नोत्तरी खेल्नुहोस्।
चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्री रहेकै बेला २२ असार १९८० मा चार श्रेणीसम्म पढाउन दुई जना पण्डित र एक जना टहलुवा दरबन्दी कायम गरी काठमाडौंको ढोकाटोलमा एउटा कन्या पाठशाला खुलेको इतिहास भेटिन्छ ।
सम्बन्धन नपाउँदा कन्या कलेज सञ्चालनमा ढिलाइ
कन्या विद्यालय शुरू भएपछि पढ्ने चाहना हुँदाहुँदै पढाइ छोडेका, मदरसामा पढ्दै आएका, गरीब तथा विपन्न परिवारका छोरीहरू यस विद्यालयमा भर्ना भएर आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन थालेका छन् ।
कोभिड–१९ को असर; ४ जीपीए ल्याउनेको संख्या १०६ बाट बढेर ९,३१९ पुग्यो !
गाउँका अगुवासमेत रहेका हेडमास्टरको हत्यामा संलग्नहरूका बारेमा स्थानीयको मनमा तितो सत्य छ, तर त्रासका कारण उनीहरू नाम लिन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयः यसरी हुन थाल्यो पठन-पाठन
कोरोना महामारीले विद्यालयको पठन–पाठन अवरूद्ध भएका बेला लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानीय पालिकाले भने पठन–पाठनको चाँजोपाँजो मिलाएका छन् ।
बालबालिकाको सुरक्षाका लागि शिक्षा मन्त्रालयले छिट्टै निसंक्रमणीकरण सम्बन्धी यो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरूरी देखिन्छ ।
बालबालिकाको सिकाइमा अर्थको असर !
कोरोनाले फराकिलो पार्दैछ ‘हुने’ र ‘नहुने’बीचको खाडल !
आम नेपाली नागरिक, शिक्षा क्षेत्रका विषयमा चासो राख्ने सबैको सर्वाधिक चासोको विषय बनेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ जारी भएको छ । शिक्षा क्षेत्रका कतिपय उपक्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिहरू त हामीसँग थियो ।
बासी तथ्यांक नपढाऔं !
प्राचीन चित्र र मूर्तिकलामा शिक्षक र विद्यार्थी
बाघ र यसलाई जोगाउने चुनौती
नेपाल सरकारले सन् २०२२ सम्ममा दोब्बरले बढाएर बाघको संख्या २५० पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ सन् २०१६ देखि २०२० सम्मको पाँच वर्षे बाघ संरक्षण कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
के-के सम्भव छ एउटा कक्षामा ?
मानिसले धन-पैसा हैन, प्रेम र सद्भावका लागि अरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ ।
बहस : ‘सार्वजनिक वस्तु’ को रूपमा शिक्षा
देशको संविधान र पार्टीका घोषणापत्रमा शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य समेत तुल्याउने संकल्प गरिए पनि नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा भने शिक्षाको बजेट घट्दो क्रममा छ। परिणामतः नर्सरीदेखि उच्च तहसम्मको शिक्ष
‘सामाजिक लाभ’को निम्ति सार्वजनिक शिक्षा बढ्नैपर्छ लगानी !
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको अभियान हरेक विद्यालयमा फूलबारी !
मोरङ, मिक्लाजुङ गाउँपालिका–६ को कालीदह आधारभूत विद्यालयले दिवा खाजाका लागि आवश्यक साग यस वर्ष आफ्नै बारीमा फलायो । उब्रिएको साग गाउँमै बिक्री पनि भयो । साग खेतीका लागि छुट्टै योजना थिएन । फूलबार
सलह अफ्रिका र अरब क्षेत्रको मरुभूमिमा पाइने विशेष प्रकारका फट्याङ्ग्रा हुन् । तर आफ्नो बसोबासको क्षेत्रको वातावरणमा फेरबदल आयो, खाद्यसंकटको संकेत भयो भने तिनै फट्याङ्ग्रा आफ्नो चोला बदलेर सलह बन्छन् ।
टीएमजेको संरक्षण सपना गुराँस फक्रिन पाइरहोस् !
शिक्षक मासिकलाई रु. १ लाखको पुरस्कार
‘सुडोकु’का सर्जकको निधन
नेपालको महिला शिक्षामा हुने एउटा आधारभूत विभेद भनेको केटा र केटीको स्कूल छनोटमा देखिने भिन्नता हो । विद्यालय तहमा कूल भर्नामा संस्थागत या निजी विद्यालयमा केटीहरूको भर्ना दर कम देखिन्छ ।
शिक्षण पेशामा महिलाको विश्वव्यापी अवस्था
शिक्षा संवाद Episode 179
शिक्षा संवाद Episode 178
शिक्षा संवाद Episode 177
जिज्ञासा र जवाफ
जिज्ञासा र जवाफ: २०७६ फागुन अंकमा प्रकाशित